2020 iTaurus Horoscope - Itaurus
2020 iTaurus Horoscope
IHoroscope yeTaurus yoNyaka ka-2020 x
Umoya:Guqula, Rollercoaster, Break, Freedom.
Iindawo zokundwendwela:ESweden, eCalifornia, eJapan.
Izinto onokuzifunda:Ukuvumisa ngeenkwenkwezi, ukuPiloting, iSalsa.
Kubomi babameli beTaurus, u-2020 sele uza kuba ngunyaka wotshintsho, ngakumbi okanye ngaphantsi, kwaye unokufumba kumava anoxinzelelo ukuba awubhetyebhetye ngokwaneleyo. Sebenza kwisiseko esikwenza uzinze emehlweni azo zonke izinto ezimangalisayo ezinokwenzeka ebomini, kwaye uqaphele ukuba ukhululekile ukuba ungubani kwaye uziveze ngokupheleleyo kungakhathaliseki ukuba imeko yakho yokwenyani inokutshintsha kangakanani ukusuka kwinyanga enye ukuya kwenye. Ixesha lasentlakohlaza lizisa ujiko olubukhali lweemvakalelo kunye namathuba amatsha ngendlela yakho, lawo aya kukunceda uphume kuko nakuphi na ukungcola obukuwo okwethutyana. Eli lixesha lokuvumela utshintsho lube nefuthe kwaye lubumbe kwakhona ubomi bakho ngayo nayiphi na indlela enokwenzeka.
Ihlobo linokukufudumeza ngamabali othando awalelweyo okanye angaqhelekanga, kwaye ukucinga kudla ngokukrazula iinqaba ezithile ozame ukuzibamba ixesha elide. Hlala uqinile kwaye usendleleni, ukuze umzimba wakho kunye nengqondo yakho icoce ityhefu kwaye ikugcine uhambelana nesingqi sendalo iphela. Ekupheleni kuka-Agasti, amabali othando olunzulu kunye nezibophelelo zexesha elide ziya kuphela okanye zibe nzulu ngakumbi. Musa ukuzinza ngaphantsi kwento eyenza waneliseke kwaye ubeke uncumo ebusweni bakho. Ubuzaza buya kukusa kude, kodwa ilizwe lakho elisondeleleneyo, elinovakalelo lifuna ukulula, ububele kunye nothando, ngaphezu kwakho konke.
Eyona mingeni mikhulu
U-Epreli yinyanga enempembelelo enkulu kwihlabathi lakho, xa unokuziva ngathi awungowakho kwindawo yakho yokuhlala yendalo, ujikelezwe ngabantu abakuthandayo. Ukungabonwa kwaye kungaqatshelwa ezinye iitalente zakho, ukholo kuwe luyakuvumela ukuba uqaphele amathuba okuba ngowahlukileyo endaweni yokuziva ulilolo okanye ulusizi kwaye ungaqondwa kakuhle. Kuxhomekeke kuwe ukuba ukhuthaze abanye kwaye uzise ubuhle kubomi obuninzi, kubandakanywa nobakho, ngoko ke unokuzama ukungahoyi igalelo kunye neenkolelo ezikubambezela kwimisebenzi yothando nekhuthazayo.
Owona Mvuzo Omkhulu
Lo nyaka uphela uzisa imvakalelo erhabaxa necacileyo yenkululeko. I-Uranus sele ikwiTaurus ixeshana kwaye sele uyiqhelile imibala yayo ekhanyayo, ekhanyayo, kodwa njengoko uxinzelelo luphela, uya kubona amathuba amaninzi enkqubela phambili kunye notshintsho olukuvumela ukuba uphefumle. Eli lixesha elifanelekileyo lokuqhawula imijikelo, wenze utshintsho kwimiba ethe yaxinga kwaye yazuzwa njengelifa kunye neenkolelo ezikwenza uzive umbi kwixesha elidlulileyo. Zinike ikhredithi kwaye uhambe apho intliziyo yakho ikuthatha khona, kunye nezithintelo ezincinci ozibekela zona kangangoko kunokwenzeka.
IPhysiology kunye noMzimba
Uxinzelelo lolona tshaba lukhulu lwefiziyoloji ngo-2020, njengoko utshintsho lusenzeka kwaye ubambe inkqubo yakho yemihla ngemihla. Ukubambelela kwiindledlana ezibethiweyo mhlawumbi akunakubakho, kodwa kuya kufuneka wenze konke okusemandleni akho ukukhwebula kukutya okungenamsoco, ukungabikho kokulala, kunye nezisombululo ezingxamisekileyo kuwo nawuphi na umba wezempilo ofuna ixesha lokuzihlaziya kunye nokuphilisa. Yiba nobubele kumzimba wakho kuqala, kwaye ujongane nayo yonke imixholo yengqondo, yobuchwephesha kunye neemvakalelo kamva. Ukukhulula i-spasm, camngca, phumla, wolule, kwaye uvumele izihlunu zakho ukuba zive zendalo kwaye zikhululekile.
Uthando kunye noSapho
Ukunxibelelana ngokweemvakalelo kubaluleke kakhulu kulo nyaka kwaye akukho sizathu sokuxhathisa amandla okuqala okuzivelela kunye nokukhula komntu ngamabali abukhali othando kunye neerollercoasters onokuthi uziphephe. Olunye ukhetho olungaqhelekanga lunokwenziwa, ngakumbi ngabo bakwiibhondi zexesha elide ezibenza bazive ngathi babambeke emgceni kungekho mnyango wokuphuma. Khumbula ukuba imeko yenkululeko kunye nesithuba somntu sivela ngaphakathi kwaye sibuyela kumbindi wamandla omntu apho nguwe othatha isigqibo sokuba ngaba malunga nokuhlala uthembekile kukhetho oludlulileyo okanye uqhubekele phambili.
Ukuqala kuka-Matshi kunye nokuphela kuka-Agasti kubeka imiceli mngeni kwizibophelelo zeemvakalelo kwipleyiti yakho kwaye kunokukwenza ube sesichengeni sokukhetha umsebenzi kunosapho okanye ukutyhalela ngaphandle kolungelelwaniso olufunekayo ukuze uhlale uthambile ngentliziyo yakho. Iimbono ezithile ziya kubuzwa njengoko kuqala ihlobo, kwaye uninzi luya kuba sisikhanyiso esisisikhokelo osidingayo ukuze usitsale kwingxaki yokwahlukana okanye amaxesha okuba wedwa kukukhusela kwimivumbo engeyomfuneko. Ngena ekwindla intloko yakho iphakamile, ukhaliphe ukujongana nazo naziphi na iimvakalelo ezifika phezulu. Ukudibanisa okufudumeleyo kunye nempilo kuya kubanjwa kumgama wendalo oziva ulungile.
Umsebenzi kunye nezeMali
Ukuphela kuka-Epreli kuzisa amathuba amangalisayo okutshintsha umfanekiso wakho wonke kunye nekhondo lomsebenzi kwaye kunokukhokelela kutyalo-mali oluyingozi ekufuneka luvavanywe kwindawo ekhuselekileyo apho imicimbi yakho ekhoyo ingabekwa emngciphekweni. Nanjengoko ulumke, lo iya kuba ngunyaka wokukhulula, uqhawuke, ukhethe umsebenzi ozimeleyo endaweni yozinzo kwindawo ezilithoba ukuya kwezintlanu, kwaye lowo wenza ukuba igunya lakho langaphakathi libe lelona gunya liphezulu lokumamela. Hlala ucinga ngaphandle kwebhokisi, ulungele ukukhululeka kwimiba ekubambeleyo ngokuchasene nokuqonda kwakho kunye nokugweba okungcono. Ngokubaluleka kwakho kwindawo kunye nokuhambelana neemvakalelo zakho kunye neseti yobuqu yexabiso, imivuzo iya kuza ngokuhamba ngokulula.
Itaurus Khetha Uphawu I-Capricorn Umhlaza Iponti